NaOvercast, tamba podcast zvakananga paApple Watch | Ndinobva mac
Nguva imwe neimwe iyo Apple Watch ine mapapiro mahombe ekubhururuka chete pasina kudikanwa kweiyo iPhone amai. Iine nhevedzano ye3 shanduro yeseru yakaunzwa, kubudirira kukuru. Kwemakore matatu unogona kusiya iyo iPhone kumba uye chengeta wachi yako yakabatana uye inoshanda.
Uye zvishoma nezvishoma ivo vanogadzira vanotora mukana weiyi kuzvitonga kuti vaishandise kune avo maapplication. Nhasi chijana che kwidibira. Iyo inozivikanwa podcast player yakagadzirisa mashandisiro ayo eApple Watch. Kubva ikozvino zvichienda mberi, haichakwanise kurodha pasi podcast iwe yauri kuteerera kuburikidza neiyo iPhone's bluetooth, asi ichazviita zvakananga kuburikidza neWi-Fi kana LTE data. Nhasi mapapiro e "Cellular" atove akati kurei zvishoma.
Iyo inozivikanwa podcast player kwidibira nokuti iOS uye WatchOS akagamuchira nyowani nyowani inonakidza kwazvo yekuvandudza nhasi. Nzira yekufambisa yashanduka kana kurodha pasi podcast kubva paInternet ichizotambwa.
Iyo App Store kuburitsa manotsi eOvercast inongotaura nezve "Akavimbika Akawandisa Anowona Apple Kurodha pasi" uye zvigadziriso zvebug. Pakutanga kuona, iwe unogona kufunga kuti iri yakapfava gadziriso inovandudza mamwe "mabugs" anowanikwa mune application. Neraki, Overcast ine akatsanangura uine rumwe ruzivo mu Twitter iko kuvandudzwa kutsva.
Uchashandisa iPhone sekupedzisira sarudzo
Uye kufambira mberi kutsva uku kunoreva kuti podcast inogona kutepfenyurwa paApple Watch kuburikidza ne LTE mutsara kana wifi pachinzvimbo chekuzviita kuburikidza neBluetooth kubva ku iPhone, sezvazvakaita kusvika zvino. Kana iwe usina Apple Watch Cellular uye iwe uri pamba yakabatana neWi-Fi yako, unotora pasi podcast zvakananga kuburikidza neWi-Fi.
Zviripachena, kana wachi isingakwanise kurodha pasi faira zvakananga kuburikidza neWi-Fi kana LTE, ichaenderera ichidaro kuburikidza ne iPhone kuburikidza MAKARALI USB sezvazvakaita pamberi pekugadziriswa. Icho chitsva ndechekuti usati waigara uchishandisa iyo iPhone senzira yekufambisa, uye ikozvino une dzimwe sarudzo dzaunosarudza kubva.
Iyi sisitimu nyowani ine mabhenefiti maviri. Chekutanga chiri pachena. Unogona kushandisa Overcast kure ne iPhone yako kana uine Apple Watch Cellular. Uye chechipiri ndechekuti kana iwe ukabatanidzwa neWi-Fi, unochengetedza yako iPhone bhatiri nekusafanirwa kuita sedigital "bhiriji" neBluetooth.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » NeOvercast iwe unogona ikozvino kuteerera podcast zvakananga paApple Watch
Aya maAirPod matsva achasvika pamusika kupera kwa2020